Kukurumidza kuchaja kweApple Watch Series 7 nemajaja anoenderana neiyo USB Power Dhirivhari protocol kana Apple ndega | IPhone nhau
Kukurumidza kuchaja kweApple Watch Series 7 ine majaja anoenderana neiyo USB Power Dhirivhari protocol kana Apple pachayo
Imwe yezvinhu zvitsva izvo zvakawedzerwawo muApple Watch Series 7 kuti vatanga kutengesa nhasi inokurumidza kuchaja. Uku kuchaja kunoda mashoma mashoma kuti aitwe uye kunyanya dambudziko raive mune yekuchaja tambo iyo yaimboshandisa USB A, iyo yava USB C uye iri muchaja pachayo.
Ndokusaka iyo kambani ichitsanangura zvinodikanwa zvinodiwa kuti zviitise uyu mutoro nepamusoro kumhanya. Mupfungwa iyi, avo vashandisi vane chepamutemo majaja eApple ane USB C yekubatanidza vanogona kuzviita nechero modhi. Ivo vasina aya emahara majaja eApple vanoenderana neiyo USB Power Dhirivhari protocol kubva 5W mhando.
Vaya vanobva kuApple vanofanirwa kunge vaine simba re18W kuti vakwanise kupa iyi yekuchaja nekukurumidza mumawachi matsva, iwo asiri epamutemo kubva kuApple achafanirwa kuve neiyo USB Power Dhirivhari (USB-PD) protocol kukwanisa kupa iyi kuchaja iyo inopa mubhadharo we80% yebhatiri rese mumaminetsi makumi mana nemashanu chete. Chinhu chakakosha apa ndechekuti isu tinoshandisa iyo tambo iyo pachayo iyo inowedzerwa mune yekutarisa kesi uye imwe yeaya majaja.
Zvakare tinofanirwa kutaura izvozvo machaja aya haana kuiswa mubhokisi yewachi nyowani asi zvinokwanisika kuzvitenga muzvitoro zveApple. Isu tinowana maneuver aya asingafadzi kunyangwe isu tichifara nenyaya yekuti ivo pakupedzisira vanowedzera USB C kune tambo yekubatanidza. Apple inotsanangurawo kuti kubhadharisa nekukurumidza kweApple Watch Series 7 hakuwanikwe muArgentina, India kana Vietnam, asi haipe tsananguro yekukamurwa uku munyika nhatu idzi.
Kune rimwe divi, rairo apa ndeye kushandisa "akagadzirira" majaja kubhadharisa michina yedu. Rangarira kuti kune emhando majaja pamusika pamitengo inonzwisisika, haufanire kutenga kubva kuApple kana usiri kuda, asi Ndokumbirawo ushandise charger uye kuchaja tambo ine chengetedzo zvitupa kudzivirira matambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kukurumidza kuchaja kweApple Watch Series 7 ine majaja anoenderana neiyo USB Power Dhirivhari protocol kana Apple pachayo
WhatsApp inoshandisa magumo ekupedzisira-kusvika-kumagumo akachengetedzwa akachengetedzwa
Kudonha ndiyo nyowani Apple TV + komedhi kubva kune vakagadzira Ted Lasso